Madaxii Ganacsiga Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis ee (Garoowe) oo ku Geeriyooday Shil Gaadhi – Saraar Media
Home›All War›Madaxii Ganacsiga Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis ee (Garoowe) oo ku Geeriyooday Shil Gaadhi
Madaxii Ganacsiga Shirkadda isgaarsiinta ee Golis Cumar Ciise Maxamed oo loo yaqaanay Cumar Faaruuq ayaa maanta ku geeriyooday shil gaari isaga iyo wiil uu dhalay sida ay inoo xaqiijiyeen qaar kamid ah mas’uuliyiinta shirkadda.
Dad-goob-joogayaal ah ayaa ku soo waramaya in gaariga rogmaday uu waday marxuum Cumar ,xilli uu marayay meel aan wax badan ka fogayn magaalada Gorowe ,lamana xaqiijin in ay safar u soo ahaayen Bosaaso iyo in kale.
Cumar Faaruuq ayaa horey shirkadda Golis uga soo noqday madaxii suuq-gaynta ee Golis ,waxaana mas’uuliyiin ka tirsan shirkadda ay sheegeen in uu xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Golis.
Maareeyaha shirkadda Golis Saciid Aadan Axmed ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Cumar Faaruuq oo uu ku sheegay in uu ahaa nin wanaagsan oo alle ka cabsi badan ,kaasi oo wax badan u qabtay bulshada uu la nool-yahay.
“Waxaan tacsi u diraya dhamaan ehelada iyo Qaraabada uu ka baxay Cumar Faaruuq ,runtii waxa uu ahaa qof wanaagsan ,waxaan dhamaanteen ugu ducaynaynaa in uu janadii alle geeyo “ ayuu yiri Saciid Cali.
Ugu danbayn ,qaar kamid ah shaqaalaha Shirkadda Golis oo la soo xiriiray HOL ayaa tacsi u diray dhamaan qaraabada iyo ehelada marxuum Faaruuq oo xubin fir-fircoon ka ahaa howlaha shirkadda Golis.
Daawo: Mudaharaad lagaga soo horjeedo Maamul u ...
Masuuliyiintii Xisbiga UCID ee Gobolka Togdheer oo ...